Miteraka krizy fananan-karena any Monaco ny tondra-dranon'ny mpifindra monina an-tapitrisany
Home » Toerana fitsangatsanganana » Miteraka krizy fananan-karena any Monaco ny tondra-dranon'ny mpifindra monina an-tapitrisany
Ny maha-tompon'andraikitra kely an'i Monaco dia nanjary nahasarika ireo mpanankarena faran'izay manan-karena hanalavitra ny volan'izy ireo amin'ny hetra ka ny mpanjaka monarka Monaco Prince Albert II dia nanome jiro maitso ho an'ny tetikasa fampandrosoana an-tanàn-dehibe any ivelany.
Ny toeram-pialofana hetra manerantany indrindra dia manana krizy fananana mihoa-pampana noho ny tsy fahampian'ny toerana ho an'ireo olona mitapitrisa 2,700 XNUMX, antenaina hipetraka ao mandritra ny folo taona ho avy.
Monaco dia mitovy habe amin'ny Central Park any New York ary manana mponina manodidina ny 38,000 miaraka amin'ny iray amin'ny dimy monja i Monegasque. Manakaiky ny 35 amin'ny mponina 100 ao Monaco no voalaza fa tapitrisa tapitrisa, izay azo inoana fa hanatevin-daharana azy ireo manerana an'izao tontolo izao.
Ny faritry ny tontolo iainana vaovao any Portier Cove dia vinavinaina hanampy enina hektara (60 metatra toradroa) amin'ny faritany Monaco misy kilometatra toradroa roa. Ny tany haverina dia hahafahana manangana trano lafo vidy lafo vidy 120.
Ny vidin'ny trano any Monaco ankehitriny dia manodidina ny 90,900 € isaky ny metatra toradroa ary ny faharoa dia i Hong Kong. Ny fangatahana tsy mitsaha-mitombo sy ny tsy fahampian'ny famatsiana dia nandefa ny vidin'i Monaco “hatrany an-tampontrano”, hoy i Edward de Mallet Morgan, mpiara-miombon'antoka amin'ny fonenan'ny praiministra ao London, Knight Frank.
Ny tetikasa dia heverina ho zava-dehibe amin'ny fitomboan'ny mikrostate. Tsy nisy trano vaovao naorina namidy tamin'ny taon-dasa, raha ny filazan'ny masoivohom-panjakana statistika IMSEE, araka ny nitanisa ny Guardian.
Nofoanana ny drafitra teo aloha ho an'ny tetika fanarenana lehibe kokoa noho ny krizy ara-bola tamin'ny 2008 niaraka tamin'ny olana ara-tontolo iainana. Bouygues, ilay orinasa mpanao trano, izay nahatafiditra ilay tetikasa roa lavitrisa dolara, dia nanome toky fa tsy hisy fahasimbana ho an'ny tontolo iainana.
Araka ny filazan'ny orinasa, ny karazan-dranomasina manan-danja rehetra dia nafindra tany amin'ny tahiry vaovao miaraka amin'ny haran-dranomasina artifisialy vita pirinty napetraka mba hipetrahana fiainana dia.
Monaco no kely indrindra amin'ny toeram-pialofana hetra, ary tsy mandoa hetra amin'ny fidiram-bolan'ny tena, hetra harena na hetra tombony. Raha te-hangataka trano honenana any Monaco, ny mpangataka dia tokony hampiseho fa manana toerana honenana izy ireo, manokatra kaonty banky Monaco ary mametraka farafahakeliny € 500,000, ary miaina amin'ny fahefana mandritra ny enim-bolana farafahakeliny.
Ny fanjakana dia mirehareha trano opera, orkesitra philharmonic, ary kaonseritra mandritra ny taona. Ankoatr'izay, Monaco dia mandray hetsika fanatanjahantena toy ny fisokafan'ny tenisy Monte Carlo sy ny Grand Prix Monaco F1.
Ny faha-26 taonan'ny World Travel Awards dia hisokatra ho an'ny fandefasana
Mpizahatany manimba ny tora-pasika Es Cavallet malaza an'i Ibiza noho ny filan-dratsin'ny filan-dratsiny